Motors Syndromeous TYBZ - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganana, variatera, kojakoja helika, kobam-baravarankely, boaty fambolena, giratra traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Motors Syndromeous TYBZ
Home / Motor / TYBZ Motors Syndrome
Hafa tsara ho an'ny lalàna mifehy ny hafainganana : lesoka ao anatin'ny 1/30000, izay manatsara ny teknolojian'ny vokarin'ny mpampiasa;
Rafitra fanaraha-maso tsotra sy azo antoka : Mampiasa fifehezana loop malalaka, izay mampihena ny faritra mety ho lesoka sy ny vidiny. Ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy feno misy inverter sy solosaina dia manana fahombiazana tsara kokoa noho ny karazana motera hafainganam-pandeha miovaova nentim-paharazana;
Anton-kery mahomby sy avo lenta, mahomby amin'ny fitsitsiana angovo : 5% ka hatramin'ny 12% no mahomby kokoa noho ny motera asynchronous an'ny HP mitovy. Satria ny motera dia tsy mila ny onja mampihetsi-po, ny herin'ny herinaratra dia manakaiky ny1;
Ny fampiharana bebe kokoa : Azo ampiasaina amin'ny fepetra henjana isan-karazany izy io. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny toerana ilana haingam-pandeha haingam-pandeha lava na fanombohana matetika aza
Motors Syndromeous TYBZ Frame 45-71
No. karazana fahefana
isa-minitra amin'izao fotoana izao
Motors Syndromeous TYBZ Frame 80
Toeram-piakarana Flang No. Poloney Refy fametrahana Alim-bolana manontolo